० पछिल्लो समयमा खासगरी निजामती कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको बीचको टकरावले काममा समस्या उत्पन्न हुने गरेको कुरा बाहिर आएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
– राजनीति र प्रशासन दुईवटा अलगअलग धार हुन्, तर एउटै मिसनका लागि दौडिएका तŒव हुन् । मिसन त राजनीतिक व्यक्तित्वले नै तय गर्ने हो । उनीहरूले दिएको विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत कर्मचारी तन्त्रले काम गर्ने हो । यसमा दुईवटै पक्षसँगसँगै जिम्मेवार छ । जो व्यावसायिक ढंगले काम गर्छन् तिनले त्यो दायराभित्र बसेर काम गरेका छन् । अनि एकाथरी के अवस्था आएको छ भने राजनीतिज्ञहरूलाई प्रशासनिक र प्रशासकहरूलाई बढ्ता राजनीति लाग्न थालेको छ । यी दुइटाको अवस्था पनि हामीले यदाकदा देख्ने गरेका छौं । मूलभूत रूपमा यो कानुनको समस्या होइन । व्यवहारगतः समस्या हो । सोच र व्यवहारगत समस्याहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ यो दोहोरोपना आउने चाहिँ गर्छ । तर, मुख्य कुराचाहिँ व्यावसायिक तरिकाले के–कति डिल गर्न सकिन्छ, त्यो सबै कुरा प्रोफेसनलमा भर पर्ने कुरा हो ।
० सरकारका मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूले सहयोग गरेनन्, सूचना चुहावट गरे भन्ने गुनासो छ नि ?
– सरकारको कार्यान्वयनको अंग मात्र हो कर्मचारी प्रशासन । सरकारले जसरी चलाउनुपर्ने हो कर्मचारीहरू त्यसरी नै चल्ने हो । सरकारले चलाउने तरिकाचाहिँ कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने हो । दण्ड–पुरस्कारको व्यवस्था त्यसकारण कानुनमा राखिएको हो । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ र कोहीकसैले गल्ती गर्छ भने कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । कर्मचारी आफैंमा परिचालित पनि हुँदैन । उसलाई राजनीतिक नेतृत्वले परिचालन गर्ने हो । परिवर्तनको यो बुझाइको राम्रोसँग कम्युनिकेसन नभएर पनि यो समस्या आएको हो । केही केही मान्छेमा विधिसम्मत तरिकाले अघि नबढ्ने समस्या पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले जति गति लिँदै जान्छ, यी समस्याहरू आफैं पन्छिँदै जान्छन् ।
० अहिले त मुख्यसचिवबाटै असहयोग भएपछि फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ नि ?
– व्यक्तिबारे त म केही भन्न चाहन्न । निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारलाई स्थायी सरकारकै रूपमा रहन दिनुपर्छ । त्यही रूपमा परिचालित गर्ने हाम्रो प्रणाली हो । त्यसकारण, यसलाई अझ विश्वासमा लिएर भएका कमि कमजोरी हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । समग्र कर्मचारीतन्त्र एकाएक फेरिने विषय होइन । यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने विभिन्न प्रणालीहरू हुन्छन्, सरकारसँग त्यो औजार छ । त्यो प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर ब्युरोक्रेसीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिनेछ । ब्युरोक्रेसी राजनीतिक नेतृत्वकै गाइडलाइनमा अगाडि बढ्ने हो । आफैं अगाडि बढ्ने तŒव चाहिँ होइन ।
० सुशासनको कुरा उठेको धेरै भयो तर हाम्रो नागरिक सेवा प्रवाह उस्तै छ, यसमा किन सुधार हुन नसकेको होला ?
– हामी लामो संक्रमण पार गरेर आएका हौं । नेपालमा करिबकरिब २०३६ सालदेखि नै प्रत्येक १० वर्षमा परिवर्तन आएका छन् । अहिलेकै पछिल्लो परिवर्तनपछि पनि हामीले लामो संक्रमण पार ग¥यौं । यो संक्रमणले राजनीतिक स्थायित्वमा पनि प्रभाव पार्छ । राजनीतिक स्थायित्व नभएको मौकामा राज्यले एउटा दूरगामी दृष्टिकोण राखेर सबै कुराहरूको परिवर्तन गर्न समय पनि नपाउने, कर्मचारी तन्त्रले पनि आफ्नो दिशाबोध नगर्ने खालको लामो संक्रमण हामीले गुजा¥यौं । त्यसकारण पनि हामीले अपेक्षित ढंगले सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको हो । दोस्रो हामीसँग बीचमा करिब १५ वर्षसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भएनन् । तीचाहिँ सीधै जनतासँग सेवा प्रवाहमा आबद्ध थिए । सिंहदरबारको अनुहार गाउँपालिका र नगरपालिकाको सेवामा देखिनुपथ्र्यो । त्यो सेवाको ऐना दिने जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थाले पनि हामीले ताŒिवक परिवर्तन गर्न नसकेका हौं ।
० अहिले पनि अझै प्रशासनिक संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं नि, होइन ?
– हो । अहिले पनि हामीसंग प्रदेशमा कतिवटा कार्यालय हुन्छन्, स्थानीय तहमा कस्ता मान्छेहरू हुन्छन्, कसरी सेवा प्रवाह गरिन्छ, त्यसका कानुनी आधार के हुन् भन्ने कुरा बनाउँदै छौं । अब परिवर्तनका निम्ति तयारीको एउटा अन्तिम खुड्किलोमा हामी छौं । तपाईंले भन्नुभएजस्तो सेवा प्रवाहको परिवर्तन र मान्छेलाई अनुभूत हुने किसिमको व्यवहारहरू देखाउने बेलाचाहिँ बल्ल आइपुगेको छ । स्थायित्व एउटा महŒवपूर्ण कुरा हो र संघीय प्रणालीका आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउने काममा पनि हामी उत्तिकै नै दत्तचित्त भएर लाग्नुपरेको छ । सरकार लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ पूर्णतया प्रणाली बसाउने वर्ष हो । त्यसपछि एउटा अनुभूत हुने किसिमको परिवर्तनतर्फ ब्युरोक्रेसी हिँड्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको कामको गति र सेवा प्रवाह कति सन्तुष्ट हुन सकिने खालको छ ?
– सरकार त आएपछि आफ्नो योजना बनाउने हो । उसले योजना बनाउँदै छ, कार्यक्रम बनाउँदै छ । परिवर्तनहरू एकैचोटि आउने होइन । परिवर्तनका लागि तयारी आवश्यकता पर्छ । योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो निराशावादी भइहालनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । एउटा स्थायी सरका आएको छ । पहिला मानसिक रूपमै मान्छेहरूले अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा राख्नु स्वाभाविक हो । स्थायी सरकारले पनि आफ्ना संरचनाहरू बनाउने क्रममा छ । तलतिर डेलिभरी गर्ने संरचनाहरू बन्दै छ । योजनाहरू बन्दै छन् । केही समयपछि जब यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान्छन् त्यसपछि परिणामहरू निस्कन थाल्छन् । तर, हामीले केही समय पर्खनुपर्छ । हामी कहिलेकाँही रातारात परिणाम आउँछ भनेर सोच्छौं । तर, त्यस्तो होइन । परिवर्तनका लागि तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ । योजना बनाउनुपर्छ । परिवर्तनका लागि एउटा योजनाबद्ध प्रयासको आवश्यकता पर्छ । जसका निम्ति निश्चित रूपमा केही समय लाग्छ ।
० सरकारका मन्त्रीहरू ठोस रूपमा योजना बनाएर काम गर्नेभन्दा पनि प्रचारबाजी गर्ने, मिडिया सेलीब्रेटी बन्ने काममा अल्मलिए भन्ने गुनासो छ नि ?
– यस्तो केहीकेही कुरा मैले पनि सुनेको छु । हामी सबैलाई थाहा छ, रातारात नतिजा निकाल्न सकिँदैन । तर, केही नतिजाहरू बाहिर निकाल्न पाए हुन्थ्यो कि अथवा मिडियामा आफ्ना कुरहरू अलि राम्रोसँग जान पाए हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले अलिकति त्यस्तो किसिमको हल्लाखल्ला भएको पनि मैले पाएको छु । सय दिनको प्रेसर भिन्नै, ६ महिनाको प्रेसर भिन्दै, के गरिस् भनेर भन्ने कुरा भिन्दै । तर, उहाँहरूले भन्न सक्नुपर्छ कि मैले यो तयारी गर्दैछु मेरो रिजल्ट आउन यति समय लाग्छ । त्यसो भयो भने मान्छेको आशा त्यो मौकासम्म बसिराखेको हुन्छ । दुई वर्षको कार्यक्रमको दुई महिनामा कसरी रिजल्ट दिने ? त्यसकारण, यो आमूल परिवर्तनकारी विषयहरूमा, सुधारका कुराहरूमा निश्चित समय लाग्छ । समय लाग्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन पनि जरुरी छ ।
० अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार नयाँनयाँ कामभन्दा पनि आफ्नै सेवासुविधा बढाउने र जनतालाई करको भार थोपर्नेतिर बढी केन्द्रित भएको गुनासो छ नि ?
– संसारभरिको अनुभवले के भन्छ भने यस्तो मौकामा संक्रमणकालीन योजना बनाइन्छ । तपाईंहामीजस्तै संघीयतामा गएको पछिल्लो मुलुक केन्यालाई हेर्नुहोला, उहाँहरूले पाँच वर्षको संक्रमणकालीन योजना बनाउनुभएको थियो । जसका आधारमा उहाँहरूले आफ्नो सबै क्रियाकलाप चलाउनुभयो । त्यति मात्र होइन, उहाँहरूले सदनको माथिल्लो तहमा संक्रमण व्यवस्थापन हेर्न संसदीय समिति पनि बनाउनुभएको थियो । संक्रमण व्यवस्थापन एउटा बहुत महŒवपूर्ण कुरा हो । अहिले आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भर्खरै आउनुभएको छ । उहाँहरूसँग कुनै योजना नै थिएन । कतिपय स्थानमा त उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने कर्मचारी पनि थिएन । त्यहाँ आएर बसेर सिकेर काम गर्ने क्रम एक ढंगले सुरुवात भयो । दोस्रो कुरा जुन मौकामा उहाँहरू आउनुभएको थियो, त्यो मौकामा उहाँहरूलाई कानुन, विधि र प्रणाली केही पनि स्थापित गरिएको थिएन । उहाँहरूलाई त्यसका लागि पनि समय लाग्यो । तेस्रो कुरा उहाँहरूलाई अनुशिक्षण गरिनुपथ्र्यो । संघीय सरकारले उहाँहरूलाई अनुशिक्षण दिनसकेको भए कसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्न हुने हो, के गर्न नहुने हो, विधि र प्रक्रिया के–के हुन् भन्ने यावत् कुराहरूको अभाव रह्यो । त्यो अभावका कारण उहाँहरूले जस्तो जान्नुभएको छ, त्यस्तै ढंगले काम सुरु गर्नुभयो । हिजो स्थानीय निकायले के काम गरेका थिए, त्यो कुरा मात्र उहाँहरूले जान्नुभएको थियो ।
त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने क्रममा करका विषयवस्तुहरू र अरू पनि सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयहरू विवादमा आए । केही स्थानीय तहमा मात्र यो समस्या हो । सबैलाई एउटै घानमा हाल्न पनि मिल्दैन । तर, यो विवाद उहाँहरूले गरेको कारणले मात्र होइन यसमा खेल्ने तŒवहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यसपाली स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जुन किसिमले कर छुटहरू अथवा अन्य सुविधाहरू पाउने अवस्थाबाट बञ्चित भएका मान्छेहरू पनि यो होहल्लामा सामेल भएका छन् । एउटा जे जस्तो कमि भएको छ, त्यसमा तुरुन्त सच्याउनुपर्छ, अर्को जे बढी हल्लाहरू भएको छ, त्यो यर्थाथभन्दा बढ्ता छ ।
एक वर्ष लगाउने अनि बहादुरी गर्र्यौ भन्नुको कुनै अर्थ छैन
विचारको बहसमा बाबुरामजी बढी भौंतारिनुभयो
काम नगरि लिने भत्ता रोक्दा कर्मचारी नै मेरो बदनाम गर्न लागे
दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्नेछ
कम्युनिस्ट असफल भएपछि हामी ठूलो हुन्छौं भन्ने मनोदशामा छ कांग्रेस
अहिलेको न्यायधिस सिफारिस सुशिलाकै पालाको विकृतिको निरन्तरता हो
सम्मेलन सफल भएको छ, लगानी आउँछ–आउँदैन हेर्न बाँकी छ
ओली सरकार ढालेर वार्ता गर्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ
एउटै नेतालाई धेरै भारी बोकाइयो भने कसरी उठ्न सकिन्छ ?
राप्रपाको समस्या भनेकै व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइइ हो
विधान लत्याएपछि पार्टीको हालत के हुन्छ ?
सरकार र पार्टी कामबीच तादाम्य हुन सकेन